Qof shaqo la’aan ah ahaan, ama haddii aad baahi gaar ah qabtid, waxaad naga heli kartaa caawimaad dheeraad ah iyo taageero. Halkan waxaad ka arki kartaa nooc caawimaadda ee aad heli kartid.
Adeegga ku salaysan abaabulid iyo is-qabadsiin
Swiidhishka loogu tala galay ajaaniibta
Kee kugu habboon?
Ma u baahantahay in aad tijaabisid in aad shaqo billawdid ama dib ugu laabatid shaqo? Haddii ay sidaas tahay, tababar shaqo ayaa kugu habboonaan kara adiga. Inta uu socdo tababarka shaqadu waxaad joogi kartaa goob shaqo oo waxaad ka qeyb qaadan kartaa hawsha iyadoo lagu gacan qabanayo.
Marka aad caawimaad uga baahan tahay in aad soo gashid suuqa shaqada waaxaad kaloo markaas awood shaqo oo dheeraad ah u noqon kartaa shirkadaha ka shaqeeya dhinacyada barwaaqo sooridda, xafiisyada dowladda, fanka ama ururrada mutudawaca ah.
Miyaad u baahantahay in aad tijaabiso inaad shaqayso si aad u hesho caddaynta awoodahaaga dhanka shaqo? Iyadoo wadata tababarka shaqada oo la xoojiyay waxa aad joogi kartaa goob shaqo oo ka qaybqaadan kartaa hawshan adigoo leh qof ku haga.
Waa barnaamij loogu talagalay dhallinyarada da'dooda 25 sano ka hooseyso. Waxaad tusaale laga caawini karaa shaqo raadsahada, tababar ama hagida waxbarashada iyo xirfadaha.
Waa barnaamij loogu talagalay dadka muddo dheer shaqolaawe ahaa, oo u baahan in dib ugu soo laabtaan suuqa shaqada.
Dhanka hagida jidka shaqo waxaad caawimaad ka helaysaa hagaha waxbarashada iyo xirfada dhanka jidka ku aadan suuqa shaqada. Adeegan waxaa sameeya adeeg bixiyayaashayada.
Waddada degdegga ahi waa waddo lagu galo suuqa shaqada oo loogu tala galay adigaaga Swiidhan ku cusub ee leh khibrad ama waxbarasho ku aaddan xirfad baahi weyn shaqaale loogu qabo.
Adigaaga shaqadoonka ah, lehna fursado fiic-fiican oo ku aaddan in shirkad sameysatid waxaad mararka qaarkood heli kartaa taageero iyo caawimaad marka aad shirkad sameysaneysid. Billawga hore ee hawlaha shirkadda waxaad heleysaa kaalmo dhaqaale oo qaabkoodu yahay taageero wax qabasho.
Haysashada waxbarasho dugsi sare waxaa kordhaya fursadahaaga inaad hesho shaqo. Dhis waxbarashadaada dugsiga hoose-dhexe iyadoo aad taageero ka helayso anaga iyo hey’addaha dawladeed ee kale.
Ansaxin waxay ka dhigantahay in kartidaada aqoon- iyo khibradeed laguu qiimeynayo. Waxay taasi khuseysaa aqoonta aad waxbarasho ku kasbatay, tan aad suuqa shaqada ka kasbatay iyo tan nolol maalmeedka.
Tusaalaha u sii diyaarinta xirfada iyo waxbarashada waa koorso hagid oo ah dhanka Xafiiska Shaqada taas oo ku siinaysa taageero inaad hesho xirfad aad bilowdo inaad barato.